Will China ever tire of Zimbabwe’s corruption and bad debt? - The Zimbabwe Mail
HomeMainWill China ever tire of Zimbabwe’s corruption and bad debt?
November 10, 2019 Staff Reporter Main, Politics 0
The relationship between China and Zimbabwe dates back more than half a century. At the height of the African nation’s armed struggle with the white minority government of Ian Smith, Beijing provided arms and training to the guerillas of the Zimbabwe African National Liberation Army, the military wing of Robert Mugabe’s Zimbabwe African National Union-Patriotic Front.
Zimbabwe sends 30 elephant calves to China
Dendere said it was possible China would reduce its investments in Zimbabwe in the future but not end the relationship entirely. Source: South China Morning Post